ဗဟုသုတများ – Page 8 – Pwintsan
အစားအစာ စားခြင်းမှ တဆင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်ပါသလား
April 16, 2020 xenodochial-chaum 0
အစားအစာကတဆင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်ပါသလား။ coronaviruses ရဲ့ အစ်ကိုတွေဖြစ်တဲ့ ပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုိင်ရာရောဂါလက္ခဏာစု(SARS-CoV)ရောဂါ နဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ လက္ခဏာစု(MERS-CoV)တွေရဲ့
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မနက်(၉)နာရီမှာ လှူရမည့် အလှူ
မိတ်ဆွေတိုိ့ သည်အစီအရင် အလှူလေးသည် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မနက်(၉)နာရီ အိမ်ဘုရားကို လှုဒါန်းရသည့် အလှုနည်းလေးပါ ကျွန်တော့fri မသီတာကလွန်ခဲ့သည့်
“စီးပွားတိုး လာဘ်ရွှင် ဘုန်းပွင့် ကံပွင့်”(ပွဲတွေ့ယတြာ) နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ နှစ်သစ်ကို အလှူအတန်းဖြင့် ကျက်သရေရှိစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ တစ်နှစ်တာလုံး
April 15, 2020 xenodochial-chaum 0
နေစရာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် (တန်ဖိုးရှိလွန်းလို့သိမ်းထားခဲ့တာပါ။အခုခေတ်မှာ လုပ်ဖို့မပြောနဲ့သိသူတောင်နည်းသွားပြီ။) ဆရာကြီးဒဂုန် ရဲ့စာတွေဖတ်ရင်း တွေ့မိလို့သိမ်းထားခဲ့တဲ့ထဲက အိမ်ဆောက်ရင် လိုအပ်ချက်တွေကို သိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မြင်လဲမြင်ဆရာ
April 14, 2020 xenodochial-chaum 0
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက မိန့်မှာခဲ့တယ်… ကပ်ဆိုက်တဲ့ အခါ ငါးပါးသီလ မြဲခြင်း အသားငါး စားသုံးမူ့နည်းခြင်း ပရိတ်ရွတ်ပုံ နေရာကျခြင်း
၇ ရက် သားသမီးများ ကပ်ဘေး က လွတ်မြောက်အောင် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး မေတ္တာပို့နေ တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်….
၇ ရက် သားသမီးများ ကပ်ဘေးက လွတ်မြောက်အောင် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး မေတ္တာပို့နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်…. အခု အချိန်မှာ
ဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ ‘မင်းညီ မင်းသားတွေ မဖူးရ’ အမိန့်တော် ထုတ်ပြန်ပြီး သော့ခတ်လိုိ့ အစောင့် တွေ ချထားခဲ့ရတဲ့ ဆုတောင်းပြည့်ရုပ်ပွားတော်မြတ်
April 12, 2020 xenodochial-chaum 0
စစ်ကိုင်းတောင် တစ်ဖက်ကမ်းကရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျဘုရားတွေဖြစ်ပြီး ဒီဆုတောင်းပြည့်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ ရွှေကြက်ယက်စေတီအတွင်းမှာ ရှိပါတယ် ။ အနော်ရထာမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်…၊ နရပတိစည်သူမင်းကြီးလက်ထက်မှာ
အသက် ၆၀ ကျော်လာတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးအတွက် ဒါတွေကိုဂရုစိုက်ပါ
အသက် ၆၀ ကျော်လျှင် သတိထားစရာများ.. အမေရိကန်မှ လေ့လာမူတခုအရ .. အသက်ကြီးသူတွေရဲ့ ၅၁ %
နှစ်သစ်မှာ ကံဇာတာတွေ ပွင့်လန်းစေဖို့ နေ့နံအလိုက် ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ပြုလုပ်နည်း…
နှစ်သစ်မှာ ကံဇာတာတွေပွင့်လန်းစေဖို့ နေ့နံအလိုက် ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ပြုလုပ်နည်း နှစ်သစ်မှာ ကံဇာတာတွေပွင့်လန်းစေဖို့….. ကောင်းကျိုးဝေဖြာ ခေါင်းဆေးယတြာ….ဘုန်းကံပွင့်ပြီး တစ်နှစ်တာလုံးကံဇာတာ
အမာရွတ်အားလုံးကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းလေး
April 9, 2020 xenodochial-chaum 0
အချိန်တိုအတွင်း အမာရွတ်အားလုံးကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ သဘာဝနည်း အရေပြားပေါ်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဘယ်လိုအမာရွတ်မျိုးကိုမဆို တစ်ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်